नियुक्तीको २ दिन नबित्दैँ कुलमानले गरे यति ठूलो अठोट, झनै पलायो आशा ! – GALAXY
नियुक्तीको २ दिन नबित्दैँ कुलमानले गरे यति ठूलो अठोट, झनै पलायो आशा !
उज्यालोका नायकको छवि बनाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नियुक्तीपछि झन् दृढ भएर अगाडी बढ्न थालेका छन् । घिसिङले विभिन्न उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उठाउन विशेष पहल लिएका हुन् ।
हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महसुल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । घिसिङ उक्त बक्यौता रकम उठाएरै छाड्ने अठोट गरेका छन् ।